musha South AMERICA FOOTBALL STORies Vatambi veBrazil Vanotamba Ederson Moraes Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nhoroondo Yese yeGoal Stopper uyo anozivikanwa zvikuru nezita reZita reNickname; "Rusvingo Brick". Our Ederson Moraes Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye zvakawanda zvisingatauri pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvechinangwa chake chekuchengeta Reflexes asi vashomanana vanofunga nezveEderson Moraes 'Bio yedu inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Ederson Moraes Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Ederson Santana de Moraes akaberekwa musi we 17th weAugust 1993 muOsasco, São Paulo, Brazil. Kuberekwa kwaEdmerson kwakanga kwakaoma mari muBrazil. Akaberekerwa nevabereki varombo vaisagona kupa zvakawanda asi vakabvumira bhora sechisarudzo chekupedzisira.
Kubvira panguva yaaiva mwana, mumwe nomumwe aisanganisira mudzidzisi wake aigara achimudana "Bull". Izvi ndechokuti bhora rave rave riri ragi rake rvuku uye Ederson wechidiki akave nekukwanisa kubhadhara rag yake.
Chishamiso chake chakauya apo akambove apfura bhora kuenda kune imwe nzvimbo yakasiyana nechekukanda kwake kwenguva refu ndokudaro kubva mubhokisi rake pahutano hwevechidiki. Anowedzera izvi kumukwanisi wekubhadhara vatambi, kudanwa kunobva kuEurope kwakauya kuna Benfica scouts uyo akavaka chido chakanyanya kumudiki wechidiki. Akwegura chete 16, Ederson akaita kuchinja kweAtlantic kuenda kuBenfica, achibatana neboka revechidiki reLisbon. Akanzwa akanakidzana zvikuru neBrazil avo vakaita sevakapoteredza.
Mukurumbira wake mukuru weEurope yakatora nguva yake kuuya. Pane imwe nguva munguva, Ederson akabvumirwa kuenda kumadekari Ribeirao mushure memaviri maviri nechepiri ye Premier Prime Liga. Pakambani, akava akaisvonaka uye akaenderera mberi kutamba kuRio Ave. Hazvina kutora nguva pamberi peBenfica.
Akatanga muboka ravo reB 'B' uye akaratidza kuva nhamba yakakodzera imwe. Ederson akaidzwa pamwe chete nevamwe vatsva vaBernardo Silva paBenfica vechidiki. Ederson akatarisana nematambudziko akawanda paakaenda kuruboshwe. Dambudziko rake guru raiva kuvapo kwekodzero Julio Cesar, iro rakanaka-rakashongedzwa nemuchengetedzi, pakati pezvigaro.
Iyo yaimbova Inter Milan yaiva zvechokwadi kuzarurirwa mu2015, ichiwana chikamu chekuwedzera kuburikidza ne2018. Zvisinei, apo mukana waEderson akauya akauya nayo. Cesar akazotanga basa rake rakaderera kumurume muduku kubva ipapo.
Pasinei nehuduku hwake, Ederson akawana kubudirira kwakawanda, achikunda Primeira Liga kaviri. Pane imwe nguva, boka rake rakakunda sezvavakakunda Zenit St Petersburg muChampions League. Izvi zvakagadzirisa kukwikwidza kwekota kwekupedzisira neBayern Munich iyo yaitungamirirwa nayo Pep Guardiola. Ederson akatarisana nemutungamiri wake weramangwana Pep Guardiola saBenfica zvishoma nezvishoma akarasikirwa nemakumbo maviri pamwe nemuchengeti wemagamba achitamba zvakanaka. Izvi zvakatsva Pep's rudo kwaari. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Ederson Moraes Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Mudzimai waEderson Moraes anonyatsoshamisa. Tarisa maziso akanaka aLais Moraes, mudzimai wekunaka.
Vakaroorana kwemakore mana uye vose vane mwanasikana wavo wokutanga ainzi Yasmin. Apo Ederson akabatana neMan City, munhu wose haana kumuratidza. Yaiva mudzimai wake waRunis, Lais, uyo vateereri vachatarira. Vose vanodikanwa vanogara vachiisa kunakidza paIndaneti yehukama hwavo.
Akanaka Lias Moraes anowanzoonekwa mumimira ichirira murume wake.
Ederson Moraes Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu hwehupenyu
Ederson Maraes ane chirevo chinotevera kumunhu hwake.
Ederson Maraes Strengths: Arikusika, ane shungu, ane rupo, ane shungu-moyo, anofara uye zvirokwazvo, anoseka.
Ederson Maraes Utera Hwedu: Anogona kuva akanyara, kuzvikudza, kusindimara kana achitsamwiswa.
Zvakaita Ederson Maraes: Zvechokwadi, iye anoda kupa rubatsiro rwemari kune avo vanoshayiwa, maitambo, kutora mazororo uye kufara neshamwari
Icho Ederson Maraes asingadi: iye haafariri kusave nehanya, achitarisana nezvakaoma chaizvo.
Mukupfupisa, Ederson anoshamisa, akasika, anozvivimba, ane simba uye ane munhu anooma zvakaoma kurwisa. Ari kunze, ane nyenyeri asi mukati makaita seshumba ine nzara yakawanda. Ndiye mumwe munhu anogona kukwanisa kuita chero chaanoda mune imwe nzvimbo yehupenyu anozviisa kwaari.
Ederson Moraes Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -nyora
Ederson ane 34 tattoos akaroorwa mumuviri wake. Aya mavara ane zvinoreva zvakasiyana-siyana, kubva muchitendero chake chechiKristu, kutamba kwake kwebhora uye mhuri yake kudzokera kuBrazil.
Kutanga pamutsipa wake, Ederson ane gumbo rinotyisa rakapoteredza aple yake yaAdam iyo inoratidzika seyo iri kupwanyika nemhepo yakashata yakakomberedza pasi pekunze kwake.
Pachifuva chake zvinoratidza kutenda kwake kwechiKristu. Ederson ane njiva inobhururuka kumusoro kwezwi "Ndiri waJesu" Anoisa muchitsiko chemuketani kuti awedzere kusimbisa kutenda kwake kwechiKristu.
Ari pamakumbo ake ndiyo chikwata chePortugal League, sezvo akachikunda naBenfica mu2015.
Ederson Moraes Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -The Encounter
Ederson anoita 2.42 anoponesa pamutambo, achienzaniswa naClaudio Bravo 1.44, David De Gea's 1.81 uye Thibaut Courtois ' 1.52. Chimwe chekuchengetedza kwakadaro chinosanganisira iye kushandisa maitiro ake akasimba uye kuisa basa rake pamutsara sezvinoratidzwa pasi apa.
Mufananidzo uri pasi apa unoratidza kuitika kwekusangana nawo Sadio Mane.
Ederson Moraes Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Kutaura naamai vake, baba, vakoma nehanzvadzi dzinoziva Ederson zvakanakisisa, mufananidzo wemurume akanyarara, ane mutsa anowedzera. Kurera kwake kwakange kwakaoma mune zvemari asi vabereki vake vakaunza hutsika nemafambi panzvimbo. Ederson anobva kumhuri yechitendero chakasimba chechiKristu.
Chinhu chimwe chinozivikanwa pakati pemhuri yake chipo. Ederson pachake akambopa pfumbamwe £ 10,000 kune aimbova kambani Osasco munguva pfupi kuti abatsire kubvisa zvikwereti zvavo.
Ederson Moraes Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Basa Ringaita
Pasina mubvunzo, Ederson akaoma, ane ushingi, ane simba, uye ari mumuviri. Ederson ane simba remuviri, rakanyanya kufungisisa uye maitiro makuru ekudzimisa.
Akava nemukurumbira sechirongwa chekuponesa nyanzvi munguva yake naBenfica. Zvisinei, anonyanya kutaridzirwa nekuda kwekupararira kwake uye unyanzvi nebhokisi patsoka dzake. Uku kudzora uye kuvimba bhora zvinomubatsira kuti arambe achichengetedza uye achikurumidza kutamba bhora kubva kumashure pavhu nemaoko ake kana netsoka - kunyange paanoiswa pasi pekumanikidza. Pasinei nekukwegura kwake, akatove akamira kunze kwekuita kwake sarudzo, kusagadzikana, uye kunyunyisa muchinangwa, pamwe nekukwanisa kwake kuronga kuzvidzivirira kwake.
CHOKWADI KUTI: Tinovonga nekuverenga Ederson Moraes Childhood Indaba yedu pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.